Little Mayvelous Things: အီးဘွတ်တရား စာရင်းရှင်းခန်း
ဟားဟားဟား. မေဗလပ်စ် အရေးအသားတွေ အရမ်းအရမ်း တိုးတက်နေပါလား။ ဖတ်ပြီး သဘောကျနေမိတယ်။ ပထမ ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်တုန်းက Ebook တရားဟော မလို့များလား ဆိုပြီး ဖြစ်လိုက်မိသေး။ ဖတ်မိတော့မှ Bush Should Die ဖြစ်တော့တယ်။ ဟားဟား။ နောက်တစ်ခုက နဲနဲကြောင်သွားတယ်။ သတန်ဆင် ဆိုတာ။ သဏ္ဍာန်ဆင်တာ ကို ပြောတာလား (alike) ဒါမှမဟုတ် တန်ဆာဆင် (decorate) လုပ်တာကို ပြောတာလား။ ညီမပြောချင်တာက ရူပကအလင်္ကာ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ် :)
စကားမစပ် အိုးဗားမား သမ္မတ ဖြစ်လာတော့ မြန်မာပြည်မှာ ရယ်စရာလေးတောင် ပေါ်လာသေးတယ်။ Oh Burma တဲ့ :P
1/24/2009 04:33:00 AM
ဟိဟိ ဖတ်ရတာ ကလိကလိနဲ့ အမရေ.. ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်..။ Oh Burma! Oh Myanmar! Oh Nay Pu Daw! :P
ဟီး တခါတလေ ပေါမိတာလေးတွေချရေးထားတာ။ နောက်မှ ကိုယ်တော်တော်ပေါခဲ့ကြောင်း ကိုယ်ဟာကိုယ်ပြန်ဖတ်ပီး ရီရအောင်။
ဟိုဟာက သဏ္ဍာန်ဆင်တာ ကို ပြောတဲ့သဘောပါ။ နှစ်လုံးဆင့်တွေ ရေးလို့မရလို့။ Vista ပေါ်မှာ install ပီးကတဲက လက်ကွက်ကီးတွေကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ဘူး။
1/28/2009 12:11:00 AM
အီတွင် ကို ဤတင် လို.ရေးလျှင် ပိုကောင်းပါကြောင်း
ကြေညာ ကိုလည်း ကြေငြာလို. ရေးလျှင်ပိုကောင်းပါ
ကြောင်း အနည်းငယ် မျှ လျှာရှည်အပ်ပါသည် ခင်ဗျား
စောဏ ဆိုတာကိုလည်း ခုနကလို.ဒါမှ မဟုတ်ရင် စောနကလို.သုံးလျှင်ပိုကောင်းပါကြောင်း ကျွန်ုပ်
မောင်သုည ၀င်ရောက်လျှာရှည် အပ်ပါကြောင်း ......... ဟီဟီ
မှတ်သားလိုက်ကြောင်းပါ နှင့် ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပါ။ :P
ဒါပေမဲ့ ပျင်းလို့ပြန်တော့မပြင်တော့ဘူး။ မှားတာ မှားတဲ့အတိုင်းပဲထားပီး နောက်ပြန်ဖတ်မှ ငါတော်တော်မှားခဲ့တာပဲဆိုပီး ပြန်ရီလိုရအောင် ဒီအတိုင်းပဲထားမယ်။
1/29/2009 05:24:00 PM
အကြံ ပေးခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါကြောင်း
ဒါနဲ. စကားမစပ် မောင်သုည ကို သိပါသလား ခင်ဗျာ
ညီမရေ figure of speech ဆိုတာ မြန်မာ လိုအင်္လကာများပါ။ အမြင် ရေးထားတဲ့စာရဲ.နောက်က meaning ကို ရည်ရွယ်ချင်ရင် သုံးချင်ကြပါတယ်။ မြန်မာအင်္လကာတွေဖြစ်တဲ့ ရူပကအင်္လကာ(mataphor)၊ဥပမာအင်္လကာ(simile)တို.လို figure of speech group ထဲမှာ simile, metaphor စသဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်။ လေ့လာချင်ရင် English Literature ကိုလေ့လာပါ။
2/23/2009 11:27:00 PM
တခုတွေ့မိလို့ ပြောမယ်နော် ...
ပန်းကန်က ဆေး တာ
စေးက စေးကပ်သော ဘာညာမှာ သုံးကြတယ်
ဘာအကြောင်းအရာကို ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် စာလုံးပေါင်းလေးမှန်အောင် ရေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ အတင်းကြီးနားလည်အောင် ဖတ်လို့ရပေမဲ့ အဲဒီအတင်းကြီးကို အာရုံစိုက်နေရတော့ စာဖတ်ရတာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကို မြန်မာလိုအသံထွက်ပြီး ရေးတာအရမ်းရုပ်ဆိုးပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးပါလား။ လူတိုင်းဖတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါ့ဘလော့ဂ်မှာ ငါရေးချင်သလိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တာတွေအတွက် တောင်းပန်ပါ၏ပေါ့ဗျာ.။